Sevilla ayaa wada hadalo la yeelatay Chelsea si ay heshiis amaah ah inta ka harsan xilli ciyaaareedka uga soo qaadato dhaliyaha reer Spain Avalaro Morata 26-jir. (Goal.com)
Heshiiskii uu Cesc Fabregas ugu dhaqaaqi lahaa Monaco ayaa dib loo dhigay maxaa yeelay kooxda ka ciyaarta Ligue 1 weli lacagaha 31-jirka qadka dhexe reer Spain kalama heshiin Chelsea. (Evening Standard)
Manchester United ayaa wada hadalo la furtay Barcelona si ay uga soo saxiixato xiddiga qadka dhexe weerarka reer Brazil Philippe Coutinho, 26-jir, laakiin dalab kasta ay la yimaadaan waa inuu ka sara maraa 100 milyan ee aas aaska ah. (Caught Offside)
Ciyaartoyda Manchester United ayaa doonaya in macalinkooda ku meel gaarka ah ee Gunnar Solskjaer si joogta ah loogu dhiibo xilka kooxda. (Mirror)
Manchester United oo laga soo diiday dalab ay ka gudbisay daafaca reer Uruguay ee kooxda Atletico Madrid Diego Godin, 32-jir. (Tutto Mercato Web)
Real Madrid ayaa bilwoday dhaqaaq ay isugu dayeyso inay Tottenham kala soo saxiixato xiddiga qadka dhexe weerarka reer Denmark Christian Eriksen, 26,-jir waxayna diyaarinayaan heshiis ay rajeynayaan inuu ku koco 100-milyan oo bound. (Independent)
Juventus ayaa sheegtay inay ka fikirieyso inay suuqa xagaaga iibiso xiddiga bartilmaameedka u ah Manchester City ee Paulo Dybala, 25-jir laakiin waa kaliya haddii ay ku helayso lacago ka badan 90-milyan oo bound laacibka reer Argentina.(Tuttosport)
Manchester City, Bayern Munich iyo Paris St-Germain ayaa dhammaan laga soo wada diiday dalab ay ka gudbiyeen Dybala. (Tuttosport – in Italian)
Borussia Dortmund iyo Bayern Munich ayay u badan tahay inay dalab ka gudbiyaan laacibka reer Germany ee weerarka kaga ciyaara RB Leipzig Timo Werner, 22-jir kaa oo lala xiriirinayay iverpool. (Bild – in German)
Chelsea ayaa xiiseynaysa xiddiga qadka dhexe Cagliari Nicolo Barella kaa oo lagu qiimeeyay 45 milyan oo bound, laakiin waxay tartan kala kulmi karaan Napoli iyo Inter Milan oo doonaya 21-jirka, kaas oo la aaminsan yahay inuu ka cago jiidayo inuu ka soo tago Serie A inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bishan Janaayo. (Goal.com)
Unai Emery ayaa ku booriyay kooxdiisa Arsenal inay bishan keenaan lacagaha si loo dhammeystiro heshiiska xiddiga qadka dhexe ee Barcelon Denis Suarez, 25-jir. Kooxda reer Spain aya xayiraad saari doonta heshiiska Amaahda haddii lacagaha 20-ka milyan ee sida joogtada ah lagula saxiixanayo Suarez xagaagan lagu soo daro. (Evening Standard)
Arsenal ayaa ugu cad cad inay la soo saxiixato weeraryahanka reer Belgium ee Yannick Carrasco. 25-jirka ayaa ka tagay Atletico Madrid bishii Feebaraayo ee sanadkii tagay si uu ugu biiro kooxda Dalian Yifang ee ka ciyaarta Shiinaha (Mirror)
AC Milan ayaa ku raad joogta weeraryahanka reer Poland ee kooxda Genoa Krzysztof Piatek iyadoo ay jirto aragtida ah in 23-jirka ay badelka joogtada uga dhigto 31-jirka reer Argentina ee Gonzalo Higuan. (La Gazzetta dello Sport – in Italian)
Arsenal iyo Manchester United ayaa ku dagaalamaya saxiixa 18-jirka reer Brazil ee goolka u ilaaliya Cruzeiro Gabriel Brazao. (Teamtalk)
Juventus ayaa dar dar galineysa qorshaha ay Serie A ku keeneyso xiddiga qadka dhexe reer Spain ee kooxda Real Madrid Isco, 26-jir, (Tuttosport – in Italian)
Liverpool iyo Everton ayaa ku dagaalamaya saxiixa xiddiga reer Portugal ee kooxda porting Lisbon Bruno Fernandes, 24-jir. (A Bola – via 90min)